Sina mpamatsy sinoa 1050 1060 1070 1100 mpanamboatra coil vita amin'ny takelaka sy mpamatsy | Huifeng
Mpamatsy sinoa ny coil sheet aluminium 1050 1060 1070 1100
Ny sakany DC:
Ny sakan'ny CC
Coil aluminiums dia be mpampiasa amin'ny elektronika, fonosana, fanamboarana, milina sns.
Coil aluminium fisokajiana
Takelaka 1000 sy coil an'ny aluminium
Ny ravina aliminioma maneho ny andiany 1000 dia antsoina koa hoe ravina aluminium tsy misy fangarony. Anisan'ireo andiany rehetra, ny andiany 1000 dia an'ny andiany misy atiny aliminioma indrindra. Ny fahadiovana dia mety hahatratra mihoatra ny 99,00%. Satria tsy misy singa ara-teknika hafa, tsotra ny fizotry ny famokarana ary somary mora ny vidiny. Io no andiany be mpampiasa indrindra amin'ny indostrialy mahazatra. Ny ankamaroan'ny vokatra mivezivezy eny an-tsena dia andiany 1050 sy 1060. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 1000 dia mamaritra ny atiny alimina farafahakeliny amin'ity andiany ity arak'ireo tarehintsoratra arabo roa farany. Ohatra, ny tarehimarika arabo roa farany an'ny andiany 1050 dia 50. Araka ny fitsipiky ny fanondroana marika iraisam-pirenena, ny atiny aliminioma dia tokony hahatratra 99,5% na mihoatra mba ho vokatra mahay. Ny fenitra teknikan'ny firaka alimina ao amin'ny fireneko (gB / T3880-2006) dia mazava ihany koa fa mamaritra fa ny atin'ny alimina 1050 dia mahatratra 99,5%. Toy izany koa, ny atin'ny alimina amin'ny takelaka aluminium 1060 andiany dia tokony hahatratra 99,6% na mihoatra
2000 andiana takelaka aluminium ary coil
Ny takelaka solomaso 2A16 (LY16) 2A06 (LY6) 2000 dia miavaka amin'ny hamafin'ny haavony, izay ny votoatin'ny singa varahina no avo indrindra, manodidina ny 3-5%. Ny takelaka aliminioma 2000 andiany dia fitaovana aliminiam-piaramanidina, izay matetika tsy ampiasaina amin'ny indostrialy mahazatra.
3000 andiana takelaka aluminium ary coil
Amin'ny ankapobeny amin'ny anaran'ny 3003 3003 3A21. Izy io koa dia azo antsoina hoe takelaka aluminium manohitra harafesina. ny teknolojia famokarana takelaka vita amin'ny alimo 3000 an'ny fireneko dia tena tsara tokoa. Ny takelaka aluminium vita amin'ny alimo 3000 dia vita amin'ny manganese ho singa lehibe. Ny atiny dia eo anelanelan'ny 1.0-1.5. Izy io dia andian-dahatsoratra miaraka amina fiadiana amin'ny harafesina kokoa. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny tontolo mando toa ny aircon, vata fampangatsiahana, ary undercars. Ambony noho ny an'ny andiany 1000 ny vidiny. Izy io dia andiana firaka mahazatra kokoa.
4000 andian-dahatsoratra alimina sy coil
Ny takelaka aluminium izay soloin'ny andian-dahatsoratra 4A01 4000 dia an'ny andiany misy atiny silika avo kokoa. Matetika ny atin'ny silika dia eo anelanelan'ny 4,5-6,0%. An'nyfitaovana fanangananas, faritra mekanika, fitaovana forging, fitaovana welding; teboka kely mitsonika, fanoherana harafesina tsara famaritana vokatra: Manana ny toetran'ny fanoherana ny hafanana sy ny fanoherana ny akanjo izy io
Maneho ny andiany 5052.5005.5083.5A05. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 5000 dia an'ny andiana alimina alimika ampiasaina matetika, ny singa lehibe dia maneziôma, ary ny atin'ny magnesium dia eo anelanelan'ny 3-5%. Izy io koa dia azo antsoina hoe firaka aliminioma-magnesium. Ny tena mampiavaka azy dia ny hakitroky ambany, ny tanjaka amn'ny tanjaka ary ny fanitarana avo. Amin'ny faritra iray ihany, ny lanjan'ny firaka aliminioma-magnesium dia ambany noho ny andiany hafa. Noho izany dia matetika ampiasaina amin'ny fiaramanidina, toy ny fiara mifono vy fiaramanidina. Izy io koa dia be mpampiasa amin'ny indostrialy mahazatra. Ny teknolojia fanodinana dia fanodinana sy famolavolana mitohy, izay an'ny andiana takelaka vita amin'ny alimina mafana, ka azo ampiasaina amin'ny fanodinana oksiômania lalina. Any amin'ny fireneko, ny takelaka vita amin'ny aliminioma 5000 andiany dia iray amin'ireo andiana takelaka alimina matotra kokoa
6000 andiana takelaka aluminium ary coil
Ny solontena 6061 dia misy singa roa maneziôma sy silikôla, noho izany dia mampifantoka ny tombony amin'ny 4000 andiany ary ny andiany 5000 6061 dia vokatra sandoka vita amin'ny alimina mangatsiaka, mety amin'ny fampiharana misy fepetra takiana amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny fitrandrahana oksidasi. Ny fahaiza-miasa tsara, ny mampiavaka ny interface tsara, ny fonosana mora ary ny fikirakirana tsara. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny fiarahan'ny fiaramanidina.
Ny toetra mampiavaka ny 6061: ny mampiavaka ny interface tsara, ny firakotra mora, ny tanjaka avo, ny fahaiza-miasa ary ny fanoherana ny harafoana matanjaka.
Fampiasana mahazatra ny aliminioma 6061: faritra misy ny fiaramanidina, faritra misy fakan-tsarimihetsika, mpamatsy, kojakoja an-dranomasina ary kojakoja elektronika, kojakoja elektronika sy tonon-taolana, haingon-trano na fitaovana isan-karazany, lohan-tsofina, loha andriamby, piston freins, piston hidrolika, kojakoja elektrika, valves ary faritra valve.
7000 andiana takelaka aluminium ary coil
Ny Representative 7075 dia misy zinc. Izy io koa dia an'ny andiana seranam-piaramanidina. Izy io dia firaka alimina-manezioma-zinc-varahina, firaka azo tsaboina amin'ny hafanana, ary firaka aliminioma mafy dia mafy miaraka amin'ny fanoherana tsara. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 7075 dia maivamaivana ary tsy ho simbaina na hiolakolaka aorian'ny fikarakarana azy. Super super rehetra Ny takelaka alimina 7075 matevina dia voamarina amin'ny fomba ultrasonika, izay afaka miantoka tsy misy poizina sy loto. Ny takelaka aliminioma 7075 dia manana fitarihana hafanana avo lenta, izay afaka hanafohezana ny fotoana famoronana ary hanatsara ny fahombiazan'ny asa. Ny tena mampiavaka azy dia ny hamafin'ny 7075 dia firaka alimina mahery, avo lenta, izay matetika ampiasaina amin'ny fananganana rafitry ny fiaramanidina sy ny ho avy. Mitaky ny fanamboarana ireo singa sy firafitra mihombo amin'ny fihenjanana mafy miaraka amin'ny tanjaka avo sy fanoherana ny harafesina mafy.
8000 andiana takelaka aluminium ary coil
Ny matetika ampiasaina dia 8011, izay an'ny andiany hafa. Raha tsiahivina dia ny takelaka aluminium izay ny asany lehibe dia ny manamboatra satroka tavoahangy dia ampiasaina amin'ny radiatera ihany koa, ary ny ankamaroan'ny dia foil aluminium. Tsy dia be mpampiasa.
"Jinan Huifeng aluminium Co., LTD". Orinasa mpamokatra fanodinana aliminioma vao natsangana, namboarina indray avy amin'ny orinasam-panjakana, miorina ao an-tanànan'i China ”rose city“ - faritanin'i PingYin, faritanin'ny tanànan'i Jinan, mirefy 600 hektara mahery.
Teo aloha: 1060 0,55mm alimina alimina ho an'ny celling
Manaraka: Taratasy fitaratra aluminium solomaso 3003 3004 3105 firaka ho an'ny haingon-trano
coil amin'ny tafo aluminium
coil aluminium indostrialy
High quality 1060 1100 3003 3105 5052 PE PVDF p ...